Mogadishu Journal » Boqorka Sacuudiga oo wiilkiisa u magacaabay Xil Wasiir oo muhiim ah
Mjournal :-Boqor Salmaan Bin C/Casiis ayaa soo saaray Wareegto uu wiilkiisa Amiir C/casiis ugu magacaabay Wasiirka cusub ee Tamarta, waana markii ugu horreysay ee Amiir ka tirsan qoyska xukuma Sacuudiga ee Al-Sacuud uu madax ka noqdo Wasaaradda Tamarta.
Wasiirka cusub waxa uu ka weyn yahay Walaalkiisa ay isku Aabaha yihiin ee Amiir Maxamed Bin Salmaan, kaasi oo ah Ninka ugu awoodda badan Sacuudiga ee ay ka go’do Talada iyo Maamulka Sacuudiga.
Waxa uu xilka kala wareegay Wasiirkii hore ee Tamarta, Khaalid Al-Falix, kaasi oo maalmo ka hor laga qaaday xilka Gudddoomiyaha Shirkadda Shidaalka Dowladda Sacuudiga ee ARAMCO.
Boqorka weli ma magacaabn Wasiir-ku-xigeenka cusub ee Wasaaradda Tamarta ee Sacuudiga.
Magacaabista Wasiirka cusub ee Tamarta Sacuudiga ayaa ah mid ku cusub dalkaasi, maadaama shanti Wasiir ee isaga dambeeyey xilkaasi tan iyo sanadkii 1960-kii uusan midkoodaba ka soo jeedin Qoyska haya Talada Boqortooyada Sacuudiga.